[साम्राजयवादीहरूसँगको मिलोमतोमा रूसी प्रतिक्रियावादीहरूले सर्वहारा वर्गका महान् गुरू, रूसी क्रान्तिका महानायक तथा लेनिनवादका प्रणेता क. लेनिनको हत्या गर्ने कोशिस गरेका थिए । त्यसबारे उहाँको सचिवको रूपमा लामाे समयसम्म काम गर्नुभएका रूसी कम्युनिस्ट नेतृ क. लिदिया अलेक्सान्द्रोभ्ना फोतिएवाद्वारा लिखित ‘पेजेज फ्रम द लेनिन्स लाइफ’ नामक पुस्तकबाट अनुवाद गरी यहाँ प्रस्तुत गरिएको हो । अनुवादः नहेन्द्र खड्का ।]